လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက်ဆိုတာ ရှိတယ်
HomeKnowledgeလူတိုင်းမှာ အားနည်းချက်ဆိုတာ ရှိတယ်
လူတစ်ယောက်ဟာ မိန်းမလှလေးတယောက်နဲ့ လက်ထပ် လိုက်တယ် ။ ရုပ်ရည်လှပတဲ့ အပြင် စိတ်ထားကလည်း အရမ်းကို ကောင်းတော့ အမျိုးသမီးကို အရမ်း ချစ်ရှာတယ် ။ တနေ့မှာတော့ အမျိုးသမီးဟာ အရေပြားရောဂါ စတင်ခံစား လာရတယ်။
အကြောင်း တိုက်ဆိုင် ချင်တော့ တရက်မှာ အမျိုးသားကလည်း အလုပ် ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်ရတယ် ။ ခရီးကနေ အိမ်ပြန်လမ်းမှာ car accident ဖြစ်ပြီး မျက်စိနှစ်လုံး စလုံး ကွယ်သွား ခဲ့ရတယ်။
ဒီနေရာမှာ ခဏလောက် ရပ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်.. အရေပြား ရောဂါသည်နဲ့ မျက်မမြင် တယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံ ခရီးဆက်ကျ မလဲ ? ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မယ် လို့ ထင်ပါသလဲ ?
တကယ်တော့ သူတို့ ၂ ယောက် အကြားမှာ ဘာပြောင်းလဲမှုမှ မရှိခဲ့ ပါဘူး။ အရင်လိုပဲ ပျော်စရာကောင်းပြီး ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေတုန်းပဲ။ အချိန်တွေ ကုန်လာတာနဲ့ အမျှ အမျိုးသမီးရဲ့ အရေပြား ရောဂါ ဟာလည်း တစတစနဲ့ ပိုဆိုးလာတယ်။ မျက်မမြင်ယောက်ကျားက သူမိန်းမ အရေပြား ရောဂါကြောင့် ရုပ်ပြတ်ဆင်းပြတ် ခံစားနေရတာကို မသိရှာဘူး ထင်ပါရဲ့ ။ သူတို့ ၂ ယောက် ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ဟိုး အရင်ကထက်တောင် တိုးပြီး ပိုလို့ ချစ်မြဲ ချစ်စဲ ကြင်နာဆဲပဲ။
နောက်ဆုံးတော့ အမျိုးသမီးဟာ အရေပြား ရောဂါနဲ့ ဆုံးသွားရှာတယ်။ သူ့အတွက်တော့ ကြီးကျယ်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကြီး တစ်ခုပဲလို့ ခံစားရတယ် ။ မိရိုးဖလာ အတိုင်း ဇနီးရဲ့ အလောင်းကို မြေချပြီး နောက်တနေ့ မှာ အမျိုးသားဟာ ဇနီးသည် ခေါင်းချခဲ့တဲ့ မြို့ကနေ အပြီးအပိုင် ထွက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ အိမ်နီးနားချင်း လူတယောက်က စကားလှမ်းပြောတယ် " ခင်ဗျား မျက်စိ မမြင်တဲ့ ကာလ တလျှောက်လုံး ခင်ဗျားရဲ့ ဝေရာ ဝိစ္စတွေ အကုန်လုံးကို ခင်ဗျား အမျိုးသမီးက မငြီးမငြူ လုပ်ပေးခဲ့တာ အခု ခင်ဗျားတစ်ယောက်ထဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ .. ခင်ဗျားတော့ ဒုက္ခလှလှကြီး တွေ့တော့မယ် "
အမျိုးသားက ပြန်ပြောတယ်.. " ဒီမှာ မိတ်ဆွေ .. အမှန်က ကျွန်တော် မျက်စိ မကန်းပါဘူး။ မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ အမျိုးသမီးဟာ သူမရဲ့ ရုပ်ဆိုး အကြည်း တန်နေတဲ့ မျက်နှာကို နေ့တိုင်း ကျွန်တော့်မြင်နေရတယ် လို့ သူသိရင် အဲ့ခံစားမှုဟာ သူရောဂါဝေဒနာ ခံစားမှုထက် ပိုပြီး နာကျဉ်ရလိမ့်မယ်။ ဒါကို ကျွန်တော် မမြင်ချင်ဘူး။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မလှတော့ပေမဲ့ သူမရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အမြဲ လှနေသူ တစ်ယောက်ပါ။ စိတ်ထား ဖြူစင်သူ တစ်ယောက်မို့ ကျွန်တော့်အတွက် ဇနီးကောင်း တယောက်ပါ။ ကျွန်တော်က သူအမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်ပြီး စိတ်ချမ်းသာနေတာ ကိုပဲ မြင်ချင်တဲ့ လူတယောက်မို့ အခုလို ဟန်ဆောင် ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် "
လောကကြီးထဲမှာ ၂ ဦး ၂ ဖက် ပြေလည် ကောင်းစားဖို့အတွက် တချို့သော အရာတွေကို မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်ပေးရ ပါတယ်။ အားနည်းချက် ချွတ်ယွင်းချက် ဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိစမြဲ။ ဒါကြောင့် no one is perfect လို့ ဆိုကြတာကိုး။ လူတယောက်ရဲ့ အားနည်းချက် ချွတ်ယွင်းချက်ကို ထောက်ပြီး အနိုင်ယူတာ လူညံ့ လူ့ပျော့ တွေရဲ့ လုပ်ရက်ပါ ။
အဲ့ဒီထဲမှာ ကိုယ်မပါမိ ပါစေနဲ့။ တစ်ယောက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို တစ်ယောက်က အပြန်အလှန် ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း ရင်ထဲက စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့ သာ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ ကြမယ်ဆိုရင် အရမ်း ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တခု အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။